InterNet for Young Starter (မြန်မာ E-Book)
Posted by : ကိုထက် Sunday, February 19, 2012
ဒါကတော့ ဆရာမျိုးသူရရေးတဲ့ ..............
နေ့စဉ်သုံးအင်တာနက် (အင်တာနက်စတင် သုံးစွဲသူများအတွက်)
ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ !!
(2) Create New Gmail Account
(3) New Account ဆောက်စဉ်အခက်အခဲများ
(4) e-mail ပေးပို့ခြင်း
(5) e-mail Attach တွဲပို့ခြင်း အစရှိတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးစုံနှင့် search Engine
အကြောင်း တွေကိုပါ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရမှာပါ .. ဆရာမျိုးသူရနဲ့ ဦးဇော်လင်းတို့ ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို မျက်စိဖွင့်ပေးတဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတွေပါ ..သူတို့တွေ ထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေကို နားလည်သလောက်ဖတ်ပြီးတော့မှ ကွန်ပျူတာကို တတ်ကျွမ်းကျင်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ .. အခု ကျွန်တော် sharing ပြန်ခွဲပေးထားတဲ့စာအုပ်လေးကို အင်တာနက် စသုံးတဲ့သူတွေအတွက် တစ်ကယ်မလိုဘူး လိုတယ်ဆိုတာကို ဖတ်ပြီးလို့ စာရွက် ၅ ရက်မပြည့်ခင် သိပါလိမ့်မယ် . ဒီစာအုပ်ဖြစ်လာအောင် scanner ဖတ်ပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ခဲ့တာ ဘယ်သူဆိုတာကို မသိပေမယ့် တစ်ကယ်ကို စိတ်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ် .. ကျွန်တော်က အခုလက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ မရှိတော့ အဲ့ဒီ့အလုပ်ကို လက်လှမ်းမမီတာ တစ်ခုပါပဲ . တစ်ကယ်လို့သာ မြန်မာပြည်မှာရှိခဲ့ရင် နေ့တိုင်း scanner နဲ့ ကို ခွါမှာမဟုတ်ဘူး.. အဲ့ဒါ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲက အရှိအတိုင်းပြောတာပါ ..
Download mediafire ၊ Download ifile.it ၊ Download rapidshare ၊ Download megaupload ၊ Download 4shared